getir အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
4.8 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（20.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
ကုန်ပစ္စည်းထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်နွေးထွေးသောဟင်းလျာများသည်သင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ရှိသည်။ သင်၏အချိန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင်နှင့်အတူအများဆုံးစားသုံးခဲ့သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူသင်၏ကြီးမြတ်ကုန်စုံဆိုင်များကိုစားသောက်ဆိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်အတူထောင်နှင့်ချီသောစားသောက်ဆိုင်များနှင့်အတူယူဆောင်လာပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းသင့်ရေအမိန့်ကိုသင့်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အိမ်မှထွက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆိုင်, ကုန်စုံဆိုင်သည်စားသောက်ဆိုင်သို့သွားရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိုဒေါင်များ, မော်တော်ယာဉ်များနှင့် motodols များနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှု။ သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးကွက်ဈေးဝယ်ခြင်းအားဖြင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့် 10 မိနစ်အတွင်းသင့်ခြေထောက်သို့ယူဆောင်လာသည်။ တင်းကုပ်ကိုမရပ်ပါနဲ့။
Live Order Tracking: သင်အမှာစာကိုနေရာချပြီးနောက်မြေပုံမှ Courier ၏ဆိုက်ရောက်ခြင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးသင်၏ထုတ်ကုန်မည်မျှ / သင်၏ထုတ်ကုန်မည်မျှရှိသနည်း, အစားအစာမှာပီဇာ, ဟမ်ဘာဂါ, Lahmacun, Lahmacun, Kebab သည်အမှာစာ, အချိုပွဲများ, အချိုပွဲများပိုမိုများပြားသောအစားအစာများကိုသင်လိုက်နာနိုင်ပါသည်။ သင်၏ Courier ၏တည်နေရာကိုသင့်အားရွေးချယ်မှုနှင့်အတူသင့်ကိုခေါ်ဆောင်စေသည့်တည်နေရာကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဒီဂျစ်တယ်နှင့်တံခါးနားမှာဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်တံခါး - တံခါးဝတွင်ငွေပေးချေမှုသည်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ ။ ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုအတွက်သင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုတစ်ကြိမ်လျှင်သင်နှင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်သို့မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်မည်သူမျှသင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်ကိုမမြင်နိုင်ပါ။ သင်၏ကဒ်အချက်အလက်များကို MasterCard ၏ငွေပေးချေမှုအခြေခံအဆောက်အအုံပုဝါသို့မဟုတ် BKM (Interbank card စင်တာ) မှထိန်းသိမ်းထားသည်။ အကယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုအင်္ဂါရပ်သည်စားသောက်ဆိုင်သို့စားသောက်ဆိုင်သို့ယူဆောင်လာပါကသင်ပေးသောအမိန့်ကိုအထူးပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီရွေးစရာနဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာမင်းရဲ့အစားအစာကိုယူလို့ရတယ်, သင့်ကိုယ်ပိုင် POS ကိရိယာနှင့်အတူငွေပေးချေမှုကိုသင်ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
ညနေ့ဝန်ဆောင်မှု: ဈေး, ကုန်စုံအိတ်များ, ညဉ့်အခါယူလာပါ။
0 န်ဆောင်မှုများ - ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည် 7/240န်ဆောင်မှုတွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို0850 532 50 50 မှ 50 အထိရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
Can the Rush to Deliver Your Groceries in 10 Minutes Be Profitable?
Aysel silahımı getir
AYSEL SİLAHIMI GETİR!?!😎
Soft black bp #ranoscugumbenim
Yemek sepeti yazıcı kurulumu getir ve fatura ödeme termal yazıcı pos58 driver indir kurulum